LG Tone Yemahara HBS-FN7: Kushanda ruzha kudzima uye nezvimwe zvakawanda | Gadget nhau
Isu tinodzokera kumutoro pamwe nekuongororwa kwechigadzirwa chine mutsindo, ino nguva kubva kuSouth Korea femu LG iyo ichangobva kuburitsa mahedhifoni akanyanya kusarudzika "emhando yepamusoro" pamusika, iwo atanga tichiedza kwenguva yakareba uye kuti tiri kuzotaura newe kwenguva refu.
Tsvaga nesu LG Tone Yemahara HBS-FN7, mahedhifoni ane disinfectant kesi, ruzha kudzima uye kushamisika kuita. Tichakuudza izvo ruzivo rwedu rwepasi rose rwakave neaya mahedhifoni akapa izvo zvakawanda zvekutaura nezvazvo nguva pfupi yadarika uye kuti mhedzisiro yave ipi mushure mekufamba patafura yedu yekuongorora.
Ino nguva isu tinotaura nezve mahedhifoni ari kumusoro kwepiramidhi yeTWS mahedhifoni ane kudzima ruzha, zvese zvekuita nemutengo. Ivo vakafanana chaizvo nechinhu chakapfuura chigadzirwa kubva kuLG pachayo icho chisati chapfuura nepatafura yedu yekuongorora, magumo muFN6 uye ayo ane mutengo wakanyanya kutakura kupfuura ino shanduro nekuti iwo ari pamakumi mapfumbamwe nemakumi mana emamiriyoni, pamwe nekusavapo kuri pachena inoshanda kurira kudzima. Tiri kutaura panguva ino nezve LG Tone Yemahara HBS-FN7 (inotevera LG FN7).
3 Kuzvimirira uye kurira kwemhando
4 Kushanda ruzha kudzima uye maonero emupepeti
Iyo mhando yakasarudza "premium" dhizaini uye kugadzira. Iko kunzwa kwatinokurumidza kuva nako kwedu kwekutanga kutaurirana nekutakura uye chigadzirwa zvakawandisa. Tine chivakwa chepurasitiki chakasviba chose cheyuniti yatakaedza uye ne-nzeve system maererano nespika yemusoro, chimwe chinhu chakakosha kana tichitaura nezvemidziyo ine ANC (Active Noise Cancellation yezita rayo muChirungu). Iyo kesi yekuchaja yakazara yakatenderera muiri rimwe chete vara rambotaurwa. Nekudaro, tinogona kuzvitenga zvichena kana tichida, aya mavara maviri ari iwo anowanikwa palette.
Vipimo of the bhokisi: X X 54,5 54,5 27,6 mamirimita
Vipimo of the mahedhifoni: X X 16,2 32,7 26,8 mamirimita
Iyo yekuchaja kesi ine LED inoratidza mashandiro emahedhifoni uye pasina kutaurwa kwechiratidzo kunze, chimwe chinhu chinoda kuziva. Yakagadzirwa nemapurasitiki epurasitiki, kusiyana nemahedhifoni pachawo, uye zvinopesana neminwe yeminwe chaizvo. Iyo compact uye inokwana zvakakwana muhomwe yako, iine USB-C kuseri kwechivharo uye bhatani rekuyanana kuruboshwe.
Nenzira iyi, isu tine yakadzama tsananguro yekuti mahedhifoni anoburitsa UV mwenje mune mahedhifoni kubvisa mabhakitiriya, iyo system LG's UVnano inopikira kudzikisa mabhakitiriya ne99,9% nemaminetsi gumi chete ekuratidzira kune yako system. Nekudaro, isu takaongorora kuti kuvhenekerwa neUV hakuitike kwemaminitsi gumi asi kunoitika kwemasekonzi mashoma.
Takatarisana nemahedhifoni ane hypoallergenic silicone mapads uye kushora kwemvura neIPX4 certification, saka tinogona kuishandisa zuva nezuva kusvika zuva nezuva maererano nekudzidziswa kana kunaya kwemvura.
Padanho rekubatanidza isu tine Bluetooth 5.0, pamwe nemukana wekubatana nezvose zviri zviviri Android uye iOS nekuda kweiyo LG Tone Mahara application iyo inogona kutorwa nekutarisa QR kodhi inowanikwa mubhokisi. Muchikamu chehunyanzvi LG inopa zvishoma dhata rehunyanzvi, saka isu tinofanirwa kutarisa zvakanyanya pamanzwiro avanotisiya mukushandisa kwavo kuburikidza nemiedzo yedu. Ivo vane mamaikorofoni maviri maviri pamwe neakawanda anoshanda Anoshanda Noise Kanzura dzimwe nzira (ANC) iyo yatinogona kugadzirisa nekudyidzana nemahedhifoni kuburikidza neyekubata panhare apo patinogona kutamba mimhanzi kana kupindura mafoni.
Kuzvimirira uye kurira kwemhando
Chikamu chinoyemurika mukana wekuita kunze kwekuchaja zvekare kwe USB-C, Qi standard isina waya kuchaja chete nekuiisa pane yechinyakare yekuchaja base. Kana iri bhatiri isu tine 55 mAh kune imwe neimwe nhare uye 390 mAh kesi. Iyo femu inotivimbisa maawa manomwe emahedhifoni uye gumi nemana kana isu tichisanganisira bhokisi rekuchaja. Mukuyedzwa kwedu takawana kwakatenderedza 7h 14m yekuzvimiririra nerunyararo kudzimiswa kwakaitwa. Ehe, zvakakosha kucherechedza izvo zve USB-C tinogona kuwana mubhadharo weawa rimwe rekushandisa pamwe nemaminitsi mashanu ekuchaja.
Kana iri kurira, LG zvakare inosarudza Meridian Audio's Dhijitari Signal Kugadziriswa, zvisinei, nzira ina dzekushandisa idzo application yako inotibvumidza kugadzirisa kugadzirisa kurira kwemhando yepamusoro. Isu takamaka zvakanaka mabhasi asi izvo hazvivhare manzwi. Hatina iyo Qualcomm aptX codec, asi hatina kucherechedza misiyano yakawandisa nemahedhifoni anoita. Ruzivo rwedu rwakagutsa uye zvinoenderana nemutengo watakabhadhara chigadzirwa, kunyangwe pamwe zvisiri kusvika kune vanokwikwidza vakaita seAirPods Pro (inodhura zvakanyanya).
Kushanda ruzha kudzima uye maonero emupepeti
Iyo femu inotivimbisa kuti isu tine mamaikorofoni matatu ekudzima ruzha kunyangwe iwo achireva maviri awo kune hurukuro. Panyaya iyi, mahedhifoni anopindura zvakanaka kune kuita kunodiwa kuti ufonere. UyeIzwi rinotsigirwa neraviri-diaphragm yaro inoita kuti chiitiko chive chakanakisa tichifunga kuti isu tiri kutaura nezve TWS in-nzeve mahedhifoni. Saka pane zvese zvinoita sekunge tinowana chigadzirwa chakatenderedza.
Iwe unogona kuwana iyo LG Tone Yemahara FN7 kubva 178 pane yako webhusaiti kana kunyange pamutengo unokwikwidza zvakanyanya kubva pa120 euros paAmazon.
Aya mahedhifoni anomira zvakanyanya mutema, aine imwe yakasvinuka uye dhizaini dhizaini, rinozove iro ruvara rwatinokurudzira. Tinovimba iwe wakafarira ongororo yedu ye LG Tone Yemahara FN7 kubva kuSouth Korea yakasimba uye zvirokwazvo tinokuyeuchidza kuti iwe unogona kutisiira chero mibvunzo nezvazvo mubhodhi rehomwe. Nenzira imwecheteyo, tinokuyeuchidza kuti iwe unogona kunyorera kune yedu YouTube chiteshi uko isu tiri kusiya zvakawanda zvinonakidza zvemukati izvo zvechokwadi iwe zvausingade kupotsa.
Toni Yemahara FN7
Yakatumirwa pa: 28 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 27 April 2021
Quite premium zvigadzirwa uye dhizaini
ANC uye kuzvitonga kwakanaka
Yakanyanya kujekesa gestural system
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » LG Tone Yemahara HBS-FN7: Active Noise Kanzura uye Zvakawanda